Xildhibaannada ku sugan Baydhabo oo mucaaradnimada Prof. Geeddi ku sii badanaya iyo mudanayaasha baarlamaanka oo beel ku qeybsaday wufuudda ka qeyb galeysa shirka mashruuca Cali Mahdi. Ruunkinet. Ruunkinet 02/07/07
Xildhibaanada ku sugan magaalada Baydhabo ayaa la sheegay in qaar badan oo ka tirsan ay si weyn uga soo horjeedaan ra'isul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Xildhibaanada oo ay ku jiraan in ku dhow 30 mudane ay ka soo jeedaan beelaha USC ayaa si weyn u diidan awoodda kali talisnimada Prof. Cali Maxamed Geeddi ayagoo sheegaya in uu si toos ah u lunsaday deeqo badan oo luugu deeqay Soomaaliya.
Sidoo kale, xildhibaanadan oo ay ka mid yihiin qaar ka tirsan golaha wasiirada ayaa ku eedeeyay in gawaari iyo lacago si qaar ah uu ra'isul wasaaraha u siisay xidhibaanada iyo golaha wasiirada qaarkood ayadoo qaarna loo sheegay in ay xaq u lahayn.
Dhanka kale, mudaneyaasha baarlamaanka ayaa loo sheegay in ay keenaan wufuud ka tirsan beelahooda oo ka qeyb gasha shirka dib u heshiisiinta Soomaalida ee lagu baaqay in uu ka dhici doono Muqdisho bartamaha bishan.
Shirkan oo ay dadka qaar ugu yeeraan mashruuca Cali Mahdi ayaa waxaa ay dad badan ka aamin san yihiin in uusan waxba soo kordhin doonin maadaama dadka isku haysta siyaasadda aysan ka qeyb galeyn intooda badan balse ay kulankaasi immaanayaan dad raacsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayadoo laga yaabo in lacago halkaasi loogu qeybiyo.